Madaxweynaha kooxda Barcelona oo si cad kaga hadlay mustaqbalka tababare Valverde – Gool FM
Madaxweynaha kooxda Barcelona oo si cad kaga hadlay mustaqbalka tababare Valverde
Dajiye May 16, 2019
(Spain) 16 Maajo 2019. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyay in tababare Ernesto Valverde uu sii maamuli doono kooxda xilli ciyaareedka soo socda, inkastoo si xoogan loo dhaleeceeyay maalmihii lasoo dhaafay.
Laakiin Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu ka fogaaday inuu wax jawaab ah ka bixiyo, mar wax laga weydiiyay wararka la xiriirinayo weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann kooxda Barcelona.
Ugu horeyn Bartomeu ayaa ka hadlay sida uu ahaa qorshayaasha kooxda Barcelona ee xili ciyaareed wuxuuna yiri:
“Bar-tilmaameedka ugu weyn wuxuu ahaa horyaalka Spain, kaddib Copa del Rey iyo tartanka Champions League, waxaan sameynay xilli ciyaareed weyn, waxaana ku guuleysanay horyaalka”.
“Hada waxaan ciyaareynaa finalka Copa del Rey, kaddib guuldaradii niyadjabka ahayd ee tartanka Champions League, haatan waa inaan dib u helnaa wadada guulaha, waxaan arkayaa horumarinta ciyaartoydeena iyo shaqaalaheena oo dhan, waxaan ka soo kaban doonnaa guuldaradii Liverpool”.
“Qorshaha xili ciyaareedka soo socda hada ayuu socdaa, waxaan sameynay saxiixyada ciyaartoy dhowr ah, waxaana arintan ka hadli doonaa kaddib kulanka finalka ee Copa del Rey”.
Ugu dambeyn madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka tababare Ernesto Valverde wuxuuna yiri:
“Wuxuu taageera ka helayaa madaxweynaha iyo guddiga kooxda, waana nooca tababaraha aan dooneyno, wuxuu kooxda kula jiraa heshiis waana ku faraxsanahay”.
Kaalintee ayey Ronaldo iyo Messi ka galeen 100-ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa kubadda cagta aduunka 25-kii sano ee la soo dhaafay?
RASMI: Kooxda Inter Milan oo ku dhawaaqay inay heshiis cusub ka saxiixatay Milan Skriniar